Dhismayaasha Guryaha California waxay ka caawin doonaan Apple inay ku guuleystaan ​​yoolalka cagaaran | Waxaan ka socdaa mac
Dhismayaasha Guryaha California waxay ka caawin doonaan Apple inay ku guuleystaan ​​yoolalka cagaaran
Marka Apple ay dejiso yool, kama quusato dadaalkeeda illaa laga gaaro. Haddii mar hore la soo jeedin jiray in toban sano gudahood kaarboon-ka-bixintu ay noqoto 0%, waxay ku socotaa jidka maxaa yeelay hadda shirkaddu durba way dhexdhexaad ka tahay qiiqa noocan ah. Laakiin sidoo kale waa in ujeeddooyinkeedu aysan ku sii ekaanin "oo keliya" halkaas. Waxay rajeyneysaa in alaab-qeybiyeyaasheeda ay la mid noqon doonaan sida cagaarka shirkadda lafteeda oo kale, waxayna sidoo kale dooneysaa inay dhameystirto mid ka mid ah mashaariicdeeda ugu hamiga badan, oo ka kooban xarun lagu keydiyo baytariyada ugu waaweyn Mareykanka. Mashruuca Guryaha California
Waxaan horey uga soo hadalnay dhowr jeer in Apple uu ka badan yahay shirkadda tiknoolajiyadda. Daryeel gaar ah si gaar ah u yeelo asturnaanta isticmaalaha, u dagaallama beelaha laga tirada badan yahay iyo waxyaabaha aad rabto deegaanka in la ixtiraamo lana daryeelo sida ugu macquulsan. Shirkad hormood ah, waxay leedahay waajibaad taxane ah oo xagga aadanaha ah. Midkood waa horumar waara taasna waxay rabtaa inay noqoto shirkaddii ugu horreysay adduunka ee aan soo saarin kaarboon. Waayo, wuxuu dejiyay xadka sanadka 2030 Tanina waxay u baahan tahay maalgashi badan iyo caawimaad shirkadaha kale.
Taasi waa sababta ay Apple uga baahan tahay alaab-qeybiyeyaasheeda inay noqdaan kuwa sida ugu macquulsan deegaanka u ah, si ay ugu hoggaansamaan nidaamyo taxane ah si ay uga taxaddaraan deegaanka. Laakiin sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad ku hareereysnaato mashaariic kale oo muhiim u ah deegaanka. Mid ka mid ah ayaa ah waxa loogu yeero California Flats oo ujeedadeedu tahay in laga abuuro meesha ugu weyn dalka Mareykanka, si loo sameeyo keyd batari ah. Waa mashruuc ka mid ah keydinta tamarta korontada Waxay awood u yeelan doontaa inay keydiso 240 megawatts oo tamar ah, oo ku filan in ka badan 7.000 oo guri oo koronto ah maalin uun
Mashruucani wuxuu taageeri doonaa kuwa jira Beerta cadceedda 130 megawatt shirkadda California, oo bixisa dhammaan tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Apple ku leedahay gobolka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dhismayaasha Guryaha California waxay ka caawin doonaan Apple inay ku guuleystaan ​​yoolalka cagaaran
5nm Apple Silicon ayaa loogu yeeray M1X ee Macs soo socda
Apple waxay gaysay in ka badan 100 milyan oo sameecado sameecado ah sannadka 2020